တရားခံဘယ်သူလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တရားခံဘယ်သူလဲ
Posted by Sine Sant on Jul 5, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 23 comments
အခြေခံလစာ တစ်ရက်ကို ၃၆၀၀ သတ်မှတ်လိုက် ပြီ ဆိုသောသတင်းမှာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ လစာ ၄၅၀၀၀ သာရရှိနေသော အလုပ်သမားများအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည် ။
ယခုသတ်မှတ်လိုက်သော ၃၆၀၀ ဆိုသည်မှာ မိသားစု တစု အတွက် လုံလောက်မှု မရှိပေမယ့် အနဲဆုံးသော အသက်ရူချောင် နိုင်သည် ။ ကုန်ဈေးနှုန်းများနောက်မှထပ်တက်မလာခဲ့ရင်ပေါ့လေ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ရက် ၁၅၀၀ ထက်စာလျှင် မဆိုးသေးဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါသည် ။
ဂျူလိုင်၁၉ ကို ဘယ်တော့မမေ့နိုင်သလို့ဂျူလိုင် ၃ ရက် ကိုလည်း ပတ္တမြားနဂါးသံရည်ကျို စက်ရုံ မှ အလုပ်သမားများဘယ်တော့မှ မေ့ လိမ့်မည် မဟုတ်တော့ပါ ။
ဂျူလိုင် ၂ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ တက်ကြွပျော်ရွှင်စွာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ လစာကို မျော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်နေကြပေမယ့် နေ့လည်ပိုင်းထမင်းစားပြီးအလုပ်ပြန်ဆင်းတော့ ဝန်ထမ်းများအားလုံး မျက်နှာမှာ ညိုးငယ်စွာ နှင့် မှိုင်တွေနေကြပြီ ။ တချို့ မှာအချင်းချင်းတီးတိုးတီးတိုးနှင့် စကားတွတ်ထိုးနေကြသည် ။ အချို့ဝန်ထမ်းများမှာတော့ ပြောစရာစကား လုံးများပျောက်ဆုံးနေကြပြီး အတွေးပေါင်းများစွာနှင့် ဗျာများနေကြသည် ။ ကြားနေရသောစကားသံများမှာ ” ငါတို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ။ နောက်အလုပ်တစ်ခုဘယ်မှာသွားရှာရမလဲ ။ နှစ်တွေအများကြီး အချိန်ကုန်ခဲ့တယ် ဘာမှဖြစ်မလာဘူး ။ အသက်တွေလည်းကြီးကုန်ပြီ ဘယ်မှာအလုပ်သွားပြန်လျှောက်ရမလဲ ။ ” စသည်ဖြင့် မသိခြင်းများစွာနှင့် စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေပြိုလဲ နေကြပြီ ။
ဌာနမှူးများအစီးအဝေးပြီးသွားခဲ့တော့ အမှန်စကားများနှင့် ကောလဟလ သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ် လာပြန်သည် ။ ဘယ်စကားကိုအမှန်ယူရမှန်းမသိ လောက်အောင် သတင်းစကားများဖေါင်းပွနေသည် ။
ထို နေ့ အတွက် စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့ စွာပဲ ရုံးဆင်းခဲ့ကြသည် ။ နောက်နေ့ မနက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ မသိခြင်းများစွာဖြင့် ရင်မောရပြန်သည် ။
ဂျူလိုင် ၃ ရက် မေ့မရနိုင်သော နေ့ တစ်နေ့ ။
စက်ရုံရှေ့ တွင် ယခင်နေ့ တွေလိုမဟုတ်ဘဲ ဝန်ထမ်းများ ဟိုနားတစု သည်နားတစု ဖြင့် စုဝေးထိုင်နေကြသည် ။ နောက် ၁၅ ရက် နေရင် စက်ရုံပိတ်မည်ဆိုသော စကားကြောင့် ဌာနမှူးများဦးဆောင်ကာ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ ထိုင်နေကြသည် ။ ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေသည ဟူသော သတင်းမှာ MG ဒါရိုက်တာ နားသို့ ပေါက်ကြားရောက်ရှိသွား၍ အချိန်အနဲငယ်ခန့် အကြာတွင်
စက်ရုံမှူး ၊ မန်နေဂျာ များဝန်းရံ ၍ ဒါရိုက်တာကြီးရောက်ချလာသည် ။
ဝန်ထမ်းများအားလုံး တစ်နေရာတည်းစုဝေး၍ နောက်ဆုံးအမိန့် 
နောက်ဆုံး စကားကို နားခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ် နေကြသည် ။
ဒါရိုက်တာရဲ့ မိန့် ခွန်းတချို့ မှာ ” ငါ တို့ မင်းတို့ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့
ကြပေမယ့် အခုလိုအခြေအနေကို လက်မခံချင်လည်း မရတော့ဘူး ။ ဒီအချိန်မှာဘယ်သူ့ ကိုမှအပြစ်တင်လို့ လည်းမရဘူး ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေ နဲ့ အဖက်ဖက်က မပြည့်စုံတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် လို့ ပဲပြောရတော့မယ် ။
မင်းတို့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ငါ့လက်ထက်မှာ စက်ရုံအတွက် လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ နဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေခေါ် ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် လေးနှစ်ဆက်တိုက် အရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဆက်ပြီးဘယ်လိုမှ
တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူး ။ အခုလည်းမင်းတို့ ကို တခြားစက်ရုံခွဲတွေဖက်ပို့ ဖို့ စီစဉ်ထားတယ် ။
အခု ဒီ ၁၅ ရက်အတွင်းမှာတော့ လက်ကျန်အလုပ်တွေကိုအပြီးဖြတ်ပေးရမယ် ။ ခုလိုဘာမှမလုပ်ဘဲ ထိုင်နေတယ်ဆိုတာ စည်းကမ်းနဲ့ မညီဘူး သူများနားကအခကြေးငွေယူထားရင် တန်ရာတန်ကြေးပြန်ပေးရမယ်
ဒါစည်းကမ်းပဲ ။ မလုပ်လို့ မရဘူး ။ ”
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကကြားဖြတ်ဝင်ပြောသည်မှာ ” ” ကျွန်တော်တို့ ကို တခြားနယ်ဝေးက စက်ရုံကိုပို့ မယ်ဆိုလည်းမသွားနိုင်ပါဘူး ဒါဟာ အလုပ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ ။နောက်ပြီး ဒီ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ စက်ရုံပိတ်မယ် ဆိုတာသိနေရက်နဲ့ ဘယ်လိုခွန်အားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမလဲ ။
ဒါရိုက်တာ ကကြားပြန်ဖြတ်ပြီး “” ကဲ တာဆိုရင် ဒီနေ့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ခွင့်စာတင်သွားပါ ၁၅ရက်လုံးအတွက် ခွင့်စာပါတင်လိုက် အဲ့ဒီ ၁၅ ရက်စာငါပေးမယ် ။ နောက်ထပ် ဘာပြောချင်သေးလဲ ပြောပါ မင်းတို့ စိတ်ထဲရှိတာပြောကြပါ ။ “”
ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ ဘာစကားတစ်ခွန်းမှ ထပ်မပြောကြတော့ပါဘူး ။ ဒါရိုက်တာပြန်သွားမှ
စက်ရုံလည်ပတ် နေတုန်းအချိန်က ဒါရိုက်တာဟာအကောင်းဆုံး
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်သနားညှာတာခဲ့တယ် ။
အဲ့ဒါတွေကို ထောက်ထားအားနာကြလို့ ပြဿနာဖြစ်စေမယ့်ဘယ်စကားကိုမှ
မပြောကြတာပါ ။ တလုတ်စားဖူးသူ့ ကျေးဇူးကို သိတတ် လိုက်တာပါ ပဲ ။
လူတဖက်သားကို အားနာတတ်တာ ကျေးဇူးသိတတ်တာ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်
တနေကုန်တဲ့အထိဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ ဆန္ဒပြနေကြတာ ညနေ ၃ နာရီ
လောက်ရောက်တော့ စာရေးမတွေ မပါဘဲ စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကိုချည်း
တစ်လစာ ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ထွက်စာမတင်ခိုင်းဘဲ ဘယ်စက်ရုံကိုသွားလို့ မပြောဘဲ ၊သွားနိုင်လားလို့ 
မမေးတော့ဘဲ အလုပ်ထုတ်လိုက်တော့တယ် ။ ၁၅ယောက်လောက်ကိုတော့ ခနောက်စိမ်း
စက်ရုံမှာလုပ်ဖို့ ရွေးထုတ်သွားတယ် ။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ အထုပ်ဆွဲပြီး အိမ်ပြန် ဖို့ ပဲကျန်တော့တယ် ။
ဒါရိုက်တာ ပြောသွားတဲ့စကားတွေနဲ့ ဆန့် ကျင်နေတယ် ဘယ်လို လုပ်လိုက်တယ်
ဆိုတာကိုတော့ ဥက္ကဌတစ်ယောက်ပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။
ဘယ်သူ့ ကိုမှအပြစ်ပြောလို့ မရဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ် ။
ပြည်သူတွေကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရမင်းအဆက်ဆက် က
အခု နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့ တရားခံပဲ ။ သူတို့ တကိုယ်စာ သူတို့ မိသားစု သူတို့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကောင်းစားဖို့ ပြည့်သူတွေရဲ့ ဂုတ်သွေးစုပ် ခဲ့တယ် ။
ပညာတတ်တဲ့သူ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူ တွေကို နိုင်ငံတွင်းမှာ မရှိအောင် မနေနိုင်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ 
နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခဲ့တယ် ။ နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေ ငတုံး ငအ တွေဖြစ်အောင်
ဖန်တီးခဲ့တယ် ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ကိုအထိန်းတဲ့အပြင်အမြတ်ကြီးစားပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွ အောင်
လုပ်တယ် ။ အခုလို ပြည်သူတွေ လမ်းပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်တာ တရားခံက
အခုလို အနဲဆုံးလုပ်ခ လစာသတ်မှတ်လိုက်တာဟာ
စက်ရုံအလုပ်သမားတွေနဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းနိုင်မယ့်မီးကိုမွှေးပေး
လိုက်သလိုပဲ ။ ဆင်းရဲသားလူဦးရေတွေပိုများလာတာပဲရှိတယ် ။ လုပ်ခလစာ
သတ်မှတ်ဖို့ ကိုလွှတ်တော်ကတရားဝင်ဥပဒေ ထုတ်ပြန်သင့်တယ် ။ လွှတ်တော်ထဲ အိပ်ပျော်ပြီး
အိမ်မက် မက် နေတဲ့ အမတ်မင်း တွေကိုတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အရှက်မရှိပေးထားတဲ့
လစာတွေကိုတော့ ကန့် ကွက်မယ့်သူ မရှိဘူး ။ တရက် ၁၆၀၀ ကိုကန့် ကွက်နေလိုက်ကြတာ ။
အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကို မွဲဆေးဖော်ကျွေးနေတာ အဓိက တရားခံမှာ
အစိုးရအဆက်ဆက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲတွင်းမှ အမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ . . .
သာမန်အားဖြင့်… ဒီမိုကရေစီအရင်းရှင်နိုင်ငံတွေဟာ.. အရင်းရှင်ဖက်ကရပ်တည်ရပါတယ်..။
သူတို့က.. အစိုးရဖြစ်အောင်.. လည်ပါတ်ငွေဖြစ်တဲ့.. “အမြတ်”ခွန်ဆောင်ကြတာကိုး…။ ပမာဏများပါတယ်..။
အလုပ်သမားတွေဆန္ဒပြရင်.. ထိမ်းသိမ်းကြီးကြပ်ရတဲ့ ရဲတွေ..ဥပဒေထိန်းသူတွေရဲ့ဝန်ထမ်းလစာက.. အလုပ်ရှင်.အရင်းရှင်တို့ရဲ့..ငွေတွေအဓိကပါတာပါ..။
မြန်မာပြည်ကတော့.. အစိုးရအပြင်.. လူထုကိုယ်၌ကိုက… ဆိုရှယ်လစ်နို့နံ့မစင်သေးဖူးပြောချင်မိ…။
အရှင်းရှင်.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံသူဆိုတာ.. ငတ်လို့ဒီအလုပ်လုပ်နေသူ.. .တယောက်မှ(တယောက်မှ)မရှိ..
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင်.. အလုပ်တွေပိတ်သိမ်း.. တခြားနိုင်ငံသွားဖွင့်မှာပေါ့နော…
သူတို့လာစေချင်လို့..စောင့်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ.. ကော်ဇောနီနဲ့ကြိုမယ့် အစိုးရတွေများ… ရိုက်သတ်လို့မကုန်…
♩ ♪ ♭♫ဘယ်သူမဆို.. ♬ ♮ ♯ ကိုယ်တန်ရာပဲရမယ်…။♬ ♮ ♯
တူနယ်.. တယ်နယ်…♬ ♮ ♯
လှုပ်မနေပါနဲ့ အူးမာမွပ်ရယ်.. အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေမှာ ရတဲ့ အလှုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆယ်ဗုံတဘုံတောင် မြန်တျန့်အလှုပ်သမားတွေ မရလျှာ…။ ၁၂နှစ်အောက် ခလေးတွေ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ၊ ကျောင်းတက်ရမည်ဆိုတာ ရေတိုကြည့်လျင် မိသားစုဝင်ငွေ နည်းတာမှန်ဗေမှည့် ရေရှည်မှာတော့ပညာမဲ့ပီး လမ်းပေါ်မျောက်အောင် တားဆီးနိုင်ဒယ် မှုတ်လား..။ လအုခဲ ဒီလိုပဲ… လူတယောက် ရှင်သန်ကြီးထွားမည့် လစာမပေးဘဲ ဂုတ်သွေးစုပ် အမြတ်ထုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ အလုပ်တွေကို အုပဒေနဲ့ မထိန်းချုပ်ရင် ဘယ်ဒေါ့မှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး မတိုးတက်လာ။
လခမပေးနိုင်လို့ လစ်သွားရင် အစားထိုးဝင်မည့်သူ ပေါ်လာလိပ်မြည်..။ ပြသနာက နိုင်ငံရေးဂေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေ ဂေါင်းရှောင်နေတာ…။ တိုင်းပြည်လည်း ခေါင်းဆောင်ချဉ်သေး.. ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမည်ဆိုတာတောင် အတိုက်အခံ ဘဝမှာ အကြံမရှိလျင် အာဏှာရလျင် သာဆိုးမြည်..။ ဘပြောင် အစိုးမရ အနေနဲ့ လှုပ်တတ်လျင် ဒါဂွင်ပဲ.. သို့ပေမှည့် စစ်စားရိတ်နဲ့ထောင်းနေတဲ့ ဘတ်ဂျက်မို့ ကူညီစိုက်ထုတ်ပေးရန် ခက်ပြီ။ အီးယူတို့ ယူအက်စ်တို့ဆီ အကူအညှီတောင်းဖို့ကလည်း မဘသကို ရှေ့တန်းတင် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ် လွန်ခဲ့ပြီ။ ဘပြောင် ဂျာပွန်သွားတာ အဲဒီကိစ္စအတွက် အကူအညီ တောင်းနိုင်မလား…။
ဒဂယ်ပဲ အလှုပ်ရှင်မြှား မပေးနိုင်ဆို ထင်သာမြင်သာ အမြတ်၊အရှုံး၊ ဝင်ငွေ၊ စားရိတ်မြှားကို တင်ပြပါ။ ဒါကြတော့ လည်း ဓဂေါင်မှ မလှုပ်ရဲ.. မပေးနိုင်သာ အော်ဒါ..။ သောက်သောက်လဲ မြတ်တုံးတော့ တပြားမှ အပိုထွက်မလာ.. အမြတ်လေးလဲ ပွန်းရော… အော်လိုက်တာ…။ အဲလိုမျိုး ကျွေးပိုင်ကျွန်ပိုင် ပဒေသရာဇ် အငွေ့အသက် ဖုံးနေတဲ့ ဈေးဂွက်ဆီးဗွားရေးအတု အလိုမယှိ..။
မှက်ချပ်… ကခြင်သား လုဆားခြင်သီ။
အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေက အလုပ်သမားတွေ သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်ရှာပေးတာရဲ့.. ဆယ်ပုံတပုံလည်း မြန်မာအလုပ်သမားတွေက ရှာပေးတာမှမဟုတ်တာကွယ်…
အလုပ်မလုပ်ပဲ.. အခွင့်အရေးကျ.. ပိုလိုချင်လို့..ဘယ်ရမလည်း..
ရင်းနှီးမျြုတ်နှံထားသူတွေကို. ဥပဒေတွေနဲ့ထိမ်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း.. ကြိုးစားသမျှ.. ဆာယိုနာရဖြစ်မှာပဲ..။
သူတို့လစ်သွားရင်.. နောင်အသစ်လာ…မလာက..တပိုင်း…။ မသေချာ..။
သေချာနေတာကတော့.. အလုပ်သမားတွေ လစာမရ..အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှာ..။
ကကြောင်ကြီးတို့လို.. ပန်းဆီရောင်မရင့်တရင့်တွေက.. တင်ကြွေးမှာလား… သိချင်..။
မပေးနိုင် ဖင်ပိတ်ငြင်းလို့ မဖြစ်ဘူးလေ အိုအိုင်စီကိုယ်ဇလှယ် အူးမာမွပ်ရဲ့…။ အလှုပ်သမားဖက်က အခြေဂံ ဆားဇရိတ်၊ နေထိုင်ဇယိတ်၊ လူနေမှုဇယိက် တွက်ချက်ပီး ခိုင်ခိုင်မာမာ တောင်းသလို အလှုပ်ရှင်badကလည်း ဘာကြောင့် မပေးနိုင်.. ဘယ်ဒွေမှာ ဆားရိတ် ထောင်းနေလဲ ချက်နဲ့လာဘ်နဲ့ ထုတ်ပြနိုင်ရမည်။ နို့မို့ဆို နိုင်ရာဖိထောင်း အဆိုးရမနိုင် အလှုပ်သမား ဖိထောင်း ဖြစ်နေမှာပေါ့စ်..။ မြေဈေးကြီးလို့ပါဆို… မြေရှင်ဘယ်သူလဲ… မြေငှားဂ ဘယ်လောက် အခွမ်ဆောင်သလဲ.. အခြားဇရိတ်တွေလှဲ ဂလိုပဲ… ဘယ်သူရလို့ ဘယ်လောက် အခွံစောင်သနီး..။ ဒဂယ်ဟုတ်လျင် အစိုးမြကနေ အိတ်စိုက်ထုတ် ကူပေးလို့ ယဒါပေါ့စ်..။ အခုဒေါ့ဂျာ…. ဇဂေါလှောက်မှ ဇောက်မနက် … တောက်စ်
တကယ်တော့ အလုပ်ရှင် တွေ ကိုလဲ အပြစ် သိပ်ပုံလို့ မရပါ။
. မြန်မာပြည် ထဲ မှာ သက်ဆိုင်ရာများ ကို ပေးရ တဲ့ ဆက်ကြေး က အင်မတန်ကြီး လွန်း ပါတယ်။
ဒီ ဆက်ကြေး တွေ ကြောင့် ဘဲ တော်ရုံ သိပ် မဝင်ချင် ကြပါဘူး။
ဒီ ဆက်ကြေး တွေ နဲ့ မြန်မာပြည် ထဲ အလုပ်လုပ် စရာ မလိုဘဲ ငွေ ကို ထားစရာ မရှိသူ တွေ ပေါ်လာတာပါ။
တကယ်တော့ ဒီ အချိန်မှာ ဘာကို မှ ဆန္ဒပြ တောင်းဆို လို့ မရပါဘူး။
မှန်ကန်တိကျ ခိုင်မာ တဲ့ စနစ်ကောင်း တွေ မရှိ သေးသ၍ ဦးရာလူ နဲ့ နီးရာလူ တွေ ဘဲ စားဖောက်ထွင်နေဦးမှာပါ။
. လောလောဆယ် မှာ ထွက်ပေါက် အတွက် လမ်းတစ်လမ်း ဘဲ ရှိတယ်။
. ခြ မစား နိုင်တဲ့ စနစ်ကောင်း တစ်ခု၊ လူ ကို ထိန်းနိုင်မဲ့ စနစ် ကောင်း တစ်ခု ရဖို့ဘဲ။
ဒီအတွက် အစိုးရ ထဲ ချစား သူ မရှိစေရ။
အဲဒီ ချမစားဖို့ ခေါင်းဆောင်ပေးမဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း နောက် ကို ဘဲ လိုက် ကြဖို့။
ဒါကို မှ နဲနဲလေး အားစိုက် ပြီး မလုပ် ချင် ကြ ဘဲ တစ်ခြား အာရုံ တွေ ထွေ နေရင် ၊ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာ ကို ကြောက်နေရင် လဲ
အဲဒီေ၈ါင်းဆောင်တွေ နောက်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ ရာဇုနှစ်တဆိတ် ကျော်ခဲ့ပီ လော်ဘီတီတီမြရေ….. ကျိလှုပ် ကြိလုတ်…။ ကိုယ်ဒိုင် ဝင်လှုပ်ရ မကောင်း ရှိဒေါ့မယ်.. ဒင်းရို့ နေရာပျောက်ကုံမှာ စိုးရို့…
ဒီ ခေါင်းဆောင် မှာလဲ သွား ရတဲ့ လမ်း က ဖြောင့် မ နေဘူး လေ ကွန်နစ်ကြောင် ရဲ့။
သွားရတဲ့လမ်း က စမ်းတဝါးဝါး လို့ သူ ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံ ပြီးသားဘဲ။
ဒီ ကြား ထဲ တိုက်ရိုက် ရန်သူ တင်မဟုတ် သွယ်ဝိုက် နောက်ကျော ဓားထိုး နဲ့ သူ့လူ ငါ့ဘက်သား တွေ လဲ ရှိ။
လုပ်နိုင်ရင် လုပ်စမ်းပါ ကြောင်။
အရင်ဆုံး “မအလ” က နိ ကို ကြောက်ပါစေ။
မဟုတ်ရင် ကြောင်အရေခွံ ကြီး ကို ကြေးမုံကြီး ဝယ်တာ မြင်နေရဦးမယ်။
အဘ လူ တွေ က ဒီဘက် က လူ တွေ ထက် ပိုပြီး စည်းလုံးကြတာ ကိုလဲ မမေ့နဲ့ ဦး။
ငတ်နေတာတောင် အဘ တို့ အတွက် အသက်ပေးချင်သူ တွေ အပုံ။
ဒီဘက်ကတော့ နဲနဲ မတူတာ နဲ့ ကွဲ ပြီဘဲ။
အစိုးမြနဲ့ အတိုက်အခံ၊ အစိုးမြနဲ့ သဘုံ စကားပြောဖို့ အာဏှာလာဘ်ဝယ်ရှိသူမှာ ပိုတာဝံ ရှိတယ်လို့ ယေဘူယျသတ်မှတ်တယ်.. တီတီလော်ဘီမြရဲ့…။ ဂလိုဘဲ ခေါင်းဆောင်ဘွားဒေါ်ဂျီးနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲသူ အခြား ဒီမိုေ၈ါင်းဆောင်မြှားအကြား ညီညွှတ်ရေးမှာလဲ အင်အားပိုကြီးသူက တာဝံပိုယူရမဲ…။ ငါ့နောက် ကောင်းကောင်းလိုက်ကြ.. မဟုတ်လျင် ဒေဝေါ၈ျီးဆွဲလိပ်မြည်း ဆိုတာ တခါဟုတ်မယ် နှစ်ခါဟုတ်မှယ် ဆယ်ခါဆိုလျင်ဒေါ့ မီဟုတ်တော့ ဗူး..။
လမ်းပေါ်ကို ရောက်ဖို့ အရင်လုပ်ပါအူး ကွန်နစ်ကြောင် ရယ်။
အဲဒီချိန်ရောက်လို့ သူလုပ်တာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးထင်ရင် သူဟာသူ ပြုတ်မှာပါ။
အခုတော့ အဲဒီ လမ်းပေါ်တောင် ရောက် အောင် မသွားနိုင်သေးဘဲ လမ်းဘေး တင် အပြစ်တင် နေ ကြတော့ ခက်ရော။
ကလေး လို အတွေး နဲ့ စိတ်ကောက်တတ်ကြသူ တွေ ကို ဒေဝေါ နဲ့ ခြောက်တာ လွန်လား။
နှစ်အဆိတ် ကြော်ဘီလေဂျာ… လှုပ်နည်းလှုပ်ဟံဗောင်းလည်း စုံပီ။ တဖက်က တုပ်တုပ်မျှ မီလှုပ်ဆိုရင်… ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပျံ ဆစ်ချိန်ရောက်ပီပေါ့စ်..။ ဒီမိုကရေစီ ယုန်တယ်၊ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု ယုန်ဒယ်.. စေ့စက်ညှိနှိုင်းရေး ယုန်ဒယ်ဆို… မူအရ မှန်နေဒယ်ဆို လူဖက် ပြန်လှည့်ဖို့ အခြိမ်ယောက်ပီပေါ့။။
ဒီ စစ် အစိုး ရ ရဲ့ ၂၅နှစ် ကျော်ကို ပြန်ကြည့်။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထဲ မှာ တုန်း က ဒီ လူ တွေ အာဏာရှင် အစစ် ဘဲ ။ ရေမရောဘူး။
. ပြည်သူတွေ ကို အရိုးအရင်းတောင် မကျွေးဘဲ သူတို့ချည်းစားနေတာ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လွတ်တာလဲ သူတို့ အကျိုးစီးပွါး အတွက်ဘဲ။ ငြင်းမရ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အရှိန် နဲ့တော့ အရင်ကလို ပြည်သူတွေ ကို ကြိုက်သလို နှိမ်မထားရဲတော့ဘူး။
အနဲဆုံးတော့ ဖုံးလိုက် ဖော်လိုက် ဖိလိုက် လျှော့လိုက်တော့ လုပ် ရင်း အခု နောက်ဆုံး သူတို့ ဟာ သူတို့ ဘယ်လို ဇာတ်ခင်း ရ မယ် မသိဘဲ ကကြိုး တွေ မှားရင်း နစ် နေတာ အမြင်ဘဲ။
ဒါကို မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လုပ်ရပ် တွေ ကို အပြစ်ပြောနေသေးတာ အံ့ရာ။
ဒါပေမဲ့ အခု ထိတော့ အမှားကြီး မမှားသေးဘူး။
နိ အစ်ကိုကြီး တောင်လာပြီး သွေးတိုးစမ်း တာ မဟန်မှန်းသိလို့ ဆုတ်ခဲ့တာဘဲ။ (sorry)
. သေချာတာက သူသာ လာပြီး ပါ နေရင် တိုင်းပြည် က ပိုလို့ ဆိုး မဲ့ အဖြစ်မို့ ဒီလို အပြင်က နေ အော်နေ သွေးထိုး နေတာ ကို ဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။
ကိုယ့်လောက်တောင် တော်တယ်လို့မှ မထင်တော့ ကျုပ်လဲ အထင်မကြီးဘူး။
. မြန်မာပြည် ထဲ က လဲ အထင်မကြီးဘူး။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလဲ ၈၈ တုန်းက ဒီလောက် အထင်မကြီးဘူး။
အခု အထင်ကြီးတယ်၊ အားကိုးတယ်။
သူ့ အရည်အချင်းမျိုး တွေ ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ မတွေ့လို့ဘဲ။
ဘော်လုံးကန် ရင် နည်းမှန်၊ လူမှန်တာ နဲ့ နိုင်ရောလား။
တစ်ဖက်က ကိုယ့်ထက် လူလုံးသာတယ်၊ လူချတယ်၊ ဒိုင် က ပင်း တယ်။
အဲဒီလို ဘဲ လေ ကြောင်ကြောင် ရယ်။
Brain-wash လုပ်ထားမခံရသူ မှန်သမျှ သိသင့်ကြတာချည်းပဲ။
ဒီ အဘွားအိုလေးပဲ ပြောနေတယ် ဆိုတာက …..
တစ်ချို့က မိန်းမတစ်ယောက် ဒီလောက်တော်တာကို လက်မခံချင်လို့ပြောတယ်။
တစ်ချို့ကနိုင်ငံ အတွက် မကြည့်ပဲ ပါစင်နယ် ရန်ညှိုးရှိလို့ကို အပြစ်ရှာနေတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ စစ်စိမ်းတွေနဲ့ မကင်းတဲ့ ဘဝမို့ နင်းဖို့ကြိုးစားတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ ပါတီ ချင်းချင်း ပြိုင်တာမို့ တက်မလာစေချင်ဘူးးး
ဒီ အချိန်ရောက်မှ တော့ မသိမရှိဘူးးး
လုပ်ရပ်မှားလားမှန်လား ဝေဖန်ရအောင်က သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျ…
ဘာမှမလုပ်ဖူးတဲ့ ယောက်ကျားရင့်မဂျီးတွေမို့ တောက်ဖတ်လုပ်ပြီးကို မရှင်းပြချင်တော့ဘူးးး
အဲဒီ အရွယ်တန်းတွေ ဒီလေဖောင်းသလောက်တော်နေရင်လေ အာဏာရှင်လက်ကလွတ်ဖို့ ကျနော်တို့ ဒီ အသက် ၇၀ အမေကို အားကိုးစရာကိုမလိုဘူးးးး
သူတို့ တော်နေရင်လည်း ဒေါ်စုဆိုတာ မှေးမှိန်သွားမှာပဲ။
တကယ်က.. အထည်ချုပ်လောကမှာ.. ယူအက်စ်ဘရန်းတွေအများဆုံး..။
သူတို့ကို .. ဆန်ရှင်အရ.. ယူအက်စ်ကပိတ်ထားလေတော့.. မြန်မာပြည်ထဲဝင်ရခက်..။
( မြန်မာပြည်သူတို့ဝင်အလုပ်လုပ်ချင်ကြတယ်ဆိုတာက.. မြန်မာပြည်က ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းထဲပါသမို့.. ယူအက်စ်ထဲ ကုန်တင်သွင်းရင်..အထူးအခွင့်အရေးရသမို့ပါ..။ ကုန်သွယ်ခွန် အလွန်သက်သာ.. ဒါမှမဟုတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်လေ..။)
Trade Benefits for Least Developed Countries – the United …
Jul 18, 2014 –7Indicators of Bangladesh’s market access in the US . … TRADE BENEFITS FOR LEAST DEVELOPED COUNTRIES. 3. Introduction: Context and Issues ….. paid on imports for which BWF were not available. The availability of …
Duty Free Benefits For Textile And Apparel Imports Into US …
Oct 13, 2011 – Duty Free Benefits For Textile And Apparel Imports Into US … treatment to textile and apparel imports from the 13 least-developed countries that …
ဒေါ်စုတက်လာရင်.. ဆန်ရှင်ကပွင့်.. အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေစုပြုံမြန်မာပြည်ဝင်မှာ..
အဲလိုအချိန်ကျ.. ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီး.. လစာတိုးတောင်းစရာတောင်မလို.. အတင်းကိုလုယက်တိုးပေးကြမှာ…။
အခုအချိန်မျိုးမှာ လစာတိုးတောင်း.. လုပ်ငန်းရှင်ငြိုငြင်အောင်မလုပ်သင့်သေး…။
လုပ်ချင်းလုပ်ချင်… ဒေါ်စုအာဏာရအောင်သာ.. ၀ိုင်းတွန်း ကူညီကြပါလို့…။
သူအာဏာရလို့မှ.. ဆန်ရှင်မဖွင့်သေးရင်.. ကျုပ်ပါဝင်ပြီး ဆန်ရှင်ပြုတ်သွားအောင် ကူလုပ်ပေးမယ်.. လို့…။
အလို… ဘွားဒေါ်ထိ စက်စက်မခံ Cat Catလှံ ဒွေပါယား… ဒါနဲ့ တဖက်ပိတ်မဲသွပ် ဘယ်ရောက်နေပါလိပ်…။
A players must hire A players.
If “A” player hiresa“B” class player, ‘n then “B” player hires “C” player,
it’s called “Bozo Explosion”
အာလဖွားဂျီး လား… သူနှာစေးနေဒယ်…
ကို ရွှေဘုန်း စကား ငှားပြောလိုက်မယ်
သင်နှင့် ဒမိုခွေစီ ကိုသာ ၀င်ခွင့်ပြုမည်။
ကျပ် ၃၆၀၀ မပေးနိုင်ဆိုသော နိုင်ငံခြားသားပိုင်စက်ရုံများ လုပ်ငန်းလျှောက်ထားစဉ် အဆိုပြုလစာနှင့်ကွဲလွဲနေ
Sun, 2015-07-05 06:30
No.785 Sunday, July 5, 2015
နိုင်ငံခြားသားပိုင်စက်ရုံ များ အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေ အဆိုပြုနှုန်း ကျပ် ၃,၆၀၀ မပေး နိုင်ဟုဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC)ထံ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ်က အဆို ပြုချက်နှင့် ကွဲလွဲနေကြောင်း အ နည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ် ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော် မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးအောင် က ပြောသည်။
အဆိုပါစက်ရုံပိုင်ရှင်များ သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်ရန် MIC ထံ အဆို ပြုချက်များတင်သွင်းခဲ့စဉ်က လုပ်ခ လစာငွေပမာဏများ ဖော် ပြထားခဲ့ရာတွင် အခြေခံလုပ် သားတစ်ဦးအားပေးမည့် လစာ နှုန်းထားမှာ ယခုအဆိုပြုနှုန်း နီးပါးအတိုင်းရှိနေသည်ဟုဆိုသည်။
‘‘သူတို့က ဒီလိုတွေမပေးနိုင် ဘူး။ စက်ရုံပိတ်မယ် ဘာညာပြောနေတော့ အဲဒီလူတွေက တကယ်ကောအလုပ်ရှင်အစစ်တွေဟုတ်ရဲ့လားမေးချင်တယ်’’ဟု အလုပ် သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူ လုံရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်ကပြော သည်။ယင်းစက်ရုံများသည် မြန်မာ နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ထံ အဆိုပြုလွှာ (proposal) တင်စဉ်က လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပါက ခေါ်ယူခန့်အပ်မည့်လုပ်သား ဦးရေနှင့် လုပ်သားများအားပေးချေမည့်လုပ်ခလစာများကိုပါ ထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
ယင်းသို့တင်ပြခဲ့ရာတွင် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု မရှိသေးသည့် အခြေခံလုပ်သားတစ်ဦး၏ လစာကိုပင် ဒေါ်လာ ၉၀ မှ ၁၀၀ ခန့် အထိပေးမည်ဆိုသော ကတိပြု ချက်များ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ဦးမျိုး အောင်ကပြောသည်။
‘‘အဲဒီလူတွေအနေနဲ့ ကိုယ် တင်ထားတဲ့ ပရိုပိုဆယ်တွေ ကိုယ် ပြန်စိစစ်ကြည့်သင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ နဂိုကတည်းက သူတို့တင်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ပေးမယ်ပြောထား တဲ့တင်ပြချက်တွေနဲ့ အခုပြောနေ တာတွေက ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး’’ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ပြည်တွင်း၌ စက်ရုံ လည် ပတ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် တရုတ် နှင့်ကိုရီးယားစက်ရုံပိုင်ရှင်များမှာ အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေ သတ် မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသား ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်သားတစ်ဦး၏ တစ်ရက်လုပ်ခ ကျပ် ၃,၆၀၀ အဆိုပြုနှုန်းကို မပေးနိုင်ဘဲ ယင်းနှုန်းထား အတည်ပြုခဲ့ပါက စက်တင်ဘာမှ စ၍ စက်ရုံ ၁၀၀ ခန့်ပိတ်သိမ်းမည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။
နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံများကမူ တစ်ရက်လုပ်ခ ကျပ် ၃,၆၀၀ အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါက စက်ရုံရေရှည်လည်ပတ်ရပ်တည်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုသာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားကြပြီး နိုင်ငံခြား သားပိုင်စက်ရုံများကဲ့သို့ ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလကို ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိ ပေ။
၎င်းတို့ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါက ယင်းလုပ်ငန်းခွင်များရှိ လုပ်သား ဦးရေနှစ်သိန်းခန့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး လုပ်ခလစာတိုး မြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းသာဖြစ်၍ လျော် ကြေးပေးအပ်ရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၂ ရက်ကပြုလုပ်သည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
စက်ရုံ ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပြုနှုန်း မပေးနိုင်ကြောင်း ၊ ဖိအား ပေးရန် လူတစ်စု က လိုက်လံစည်းရုံးလုပ်ဆောင် နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား စိုက်ပျိုး ရေးနှင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း ပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးဦးဇာနည်သွေးကပြောသည်။
ယခုအချိန်မှာ အမျိုးသား ကော်မတီက သတ်မှတ်ထား သည့် အဆိုပြုနှုန်းကို အကျိုး အကြောင်းနှင့်တကွ တင်ပြကန့်ကွက်နိုင်ခွင့်ရှိနေသော်လည်း အဆိုပြုနှုန်းကိုသာကြည့်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုကဲ့သို့ ပြုလုပ်နေခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးကဆိုသည်။
သတ်မှတ် အဆိုပြုနှုန်းကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှစတင်၍ နှစ်ပတ် အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပြီး ယခု အချိန်ထိ တစ်ရက်လုပ်ခ ကျပ်၃,၆၀၀ မပေးနိုင်ဟု ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်ပါဝင်ခြင်း မရှိသော ကန့်ကွက်စာတစ်စောင်သာ အမျိုးသားကော်မတီသို့ရောက်ရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
စစ်သားတွေ ဥပဒေပြုရေး မလုပ်သင့် စစ်တန်းလျား ပြန်သင့်
ကိုယ့် ဆိုင်ရာ နေရာမှာ ဆိုင်ရာ တာဝန်ကိုသာ ကျေကြ
ဒါဖြင့် ကျောင်းသား ဘုရားသား စစ်သား မဟုတ်ရေးချမဟုတ်တဲ့
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆိုင်ရာနေရာ ဆိုင်ရာတာဝန် က ဘယ်မှာလဲ ဘာလဲ
ဖတ်ပြီး အတွေးတွေ အများကြီး ဖြစ်မိ
တစ်ခါ တစ်ခါ ကျနော်တို့ မှာ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ဘဲ အငြင်းအခုန်ဖြစ်ရ
ဦးနှောက်စားရ တာ ကြာပေါ့
.တိုတိုပြောရရင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ မသတ်မှတ်သင့်သေး
lu lu ရယ်၊ဆင်းရဲတွင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်
ဘာနဲ့အလားဏ္ဍန်တူလဲဆို အားလုံးကို ဆင်းရဲတွင်းကနေလွှတ်မြောက်ဖို့အတွက်
ချပေးလိုက်တဲ့ လှုပ်ရမ်းပြီး ချပေးလိုက်တဲ့ ကြိုးစလေးလိုပါပဲ။ဆင်းရဲတွင်းကနေ၊လွှတ်မြောက်ဖို့အတွက်၊
အဲဒီလှုပ်ရမ်းနေတဲ့ကြိုးစကို အမိအရလှမ်းဆွဲနိုင်ပြီး အမိအရ ကုတ်တက်နိုင်ဖို့အတွက်
အားလုံးမှာ ဝီရိယရှိဘို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် ၊ ဆန္ဒတူညီရှိနိုင်ဘို့လိုအပ်ပါတယ် ။ ကြိုးစားနိုင်ကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်၊
အားလုံးက ကြိုးစားနိုင်ကြမှသာ ရကြမှာပါ။။။ ကြိုးစားအားထုတ်ပါလျှက်နှင့်မရနိုင်ဘူးဆိုရင် ကံပေါ့နော် ။
ကိုယ်ဖမ်းမိအောင် လုပ်ရမဲ့ကြိုးစက ၊နဂိုချထားပေးကတည်းက လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ ကြိုးစဖြစ်နေတာဆိုတော့လဲ ဖမ်းရတာအခက်သား…။။